परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भनेको अर्थ के हो?
प्रश्न: परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भनेको अर्थ के हो?
उत्तर: बाइबलले प्रेमलाई कसरी वर्णन गर्दछ हेरौँ, र त्यसपछि हामी केही कुराहरु देख्नेछौँ जसमा परमेश्वर प्रेमको सार हुनुहुन्छ। “प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ। प्रेमले डाह गर्दैन, न शेखी गर्छ। प्रेम हठी हुँदैन, न ढीट हुन्छ। प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन, झर्को मान्दैन, खराबीको हिसाब राख्दैन। प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन, तर ठीक कुरामा रमाउँछ। प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको पत्यार गर्छ, सबै कुरामा आशा राख्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ। प्रेमको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन (१कोरिन्थी १३:४-८अ)।” यो चाहिँ परमेश्वरद्वारा गरिएको प्रेमको विवरण हो, र किनकि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ (१यूहन्ना ४:८), त्यसैले उहाँ त्यस्तै नै हुनहुन्छ।
प्रेम (परमेश्वर) ले आफैलाई कसैमाथि जबरजस्ती गर्दैन। जो उहाँको नजिक आउदछन् ऊनीहरुले उहाँको प्रेमको प्रतिक्रियाको कारणले आउदछन्। प्रेम (परमेश्वर) सबैलाई दया देखाउँदछ। प्रेम (येशू) ले कुनै भेदभाव नराखी सबैको लागि असल कार्य गर्नुभयो। प्रेम (येशू) ले अरुसँग भएका थोकहरुको लोभ गर्नु भएना, तर बिना गुनासो नम्रतासँग जीवन बिताउनु भयो। प्रेम (परमेश्वर) ले आज्ञाकारिताको माग गर्दैन। परमेश्वरले आफ्ना पुत्रबाट आज्ञाकारिताको माग गर्नुभएन, तर, येशूले आफ्ना स्वर्गका पिताको इच्छालाई स्वेच्छापूर्वक पालन गर्नुभयो। “तर म पितालाई प्रेम गर्दछु, र जस्तो पिताले मलाई आज्ञा गर्नुभएको छ सोही बमोजिम गर्दछु भनी संसारले जानोस्” (यूहन्ना १४:३१)। प्रेम (येशू) ले जहिले पनि अरुहरुको रुचिहरुलाई हेर्नुहुन्थ्यो/हेर्नुहुन्छ।